I-J-147 Powder (Isinyathelo ngeNyathelo) Ukugqibezela ukuThengisa nokuHlola
/Blog/J-147/I-J-147 Powder IsiGqeba sokuThengisa nokuThengisa okupheleleyo
ezaposwa ngomhla 05 / 03 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo J-147. Ibe 1 Comment.
Yonke into malunga nePramiracetam powder
1.Yintoni i-J-147 powder?
I-2.SARMS I-J-147 Ukusetyenziswa kwe powder
3. IIMISHWANKATHELO J 147 Isistim sokuthathwa
4.Izibonelelo eziphambili zeSarms J-147 powder
5.Ziziphi iingongoma eziphambili zengxelo ye-J-147 yokuhlola i powder?
6.Kukhona naziphi na iimpembelelo eziPhakathi Xa usebenzisa i-J-147 powder?
7. Yiyiphi imveliso enokuthi ithathe indawo ye-Sarms J-147 powder?
8. Yintoni umehluko phakathi kwe-147 ne-T-006?
9.More i-SARMS Powder yokukhetha
10.Uphi ukufumana umthombo we powder J-147?
I-J-147 powder ividiyo
I.Raw J-147 powder ezisisiseko Abalinganiswa:
igama: I-J-147 powder
1. Yintoni i-J-147 powder?
I-J-147 powder Umzekelo: I-1146963-51-0 iyinxalenye ye-neuroprotective ene-phenyl hydrazide (i-EC50 = i-60-115 nM) ekhusela i-neurotoxicity kwi-coral neurons in vitro, inempahla ebalulekileyo ye-neurotrophic ehlobene nokuqulunqwa kwe-brain neurotrophic factor (BDNF) . kwafunyanwa ngokusekelwe ekusebenzeni kwimizekelo emininzi yenkcubeko ye-pathologies ezinxulumene neminyaka kunokuba i-amyloid metabolism kuphela. Ingummangaliso kakhulu, umlomo osebenzayo ngomlomo kunye ne-neuroprotective inamandla okuphucula imemori kwizilwanyana eziqhelekileyo kunye nokukhusela imemori kwi-Alzheimer's disease (AD). Ezi ziphumo zihambelana nokunyuka kwengqondo efunyenwe neurotrophic factor levels, ukunyuswa kwexesha elide, ukulondolozwa kweeprotheni ze-synaptic, ukunciphisa amanqaku okuxinzezeleka kwengcinezelo kunye nokuvuvukala, ukunciphisa i-amyloid plaques, kunye namanqanaba aphantsi e-amyloid β. Iimpembelelo ze-molelocule enye ibonisa ukuba i-J-147 powder inakho ukulungiselela unyango lwe-AD
Iintetho: J 147, J147
Isisindo somzimba: 350.33
Isitoreji sokugcina: I-2 iminyaka -20 ° C Ubunzima, iiveki ze-24 ° C kwi-DMSO, iinyanga ze-6-80 ° C kwi-DMSO
Igama leKhemikhali: 2,2,2-Trifluoroacetic acid 1- (2,4-Dimethylphenyl) -2- [(3-methoxyphenyl) methylene] i-hydrazide
Ukuphuculwa komsebenzi we-neurogenic ngaphezu kwe-J-147 powder cas: I-1146963-51-0 kumaseli esandulela-phambili angama-neural ane-derivative yayo ebizwa ngokuba yi-CAD-31. I-CAD-31 ikhuthaza ukusetyenziswa kwamafutha e-free acids kwimveliso yamandla ngokutshintshwa kweprogram ye-metabolic ye-fatty acids ekuveliseni i-ketone bodies, umthombo onamandla wamandla engqondweni xa amazinga e-glucose aphantsi. ebizwa nge-ATP synthase, efumaneka kwi-mitochondria.
2. SARMS Ukusetyenziswa kwe-J-147 powder
I-J147 Ifowuni yomnxeba: I-1146963-51-0 yayisungulwe ekuqaleni kwi-2011, kwaye AASraw Abaphandi baqhuba uphando oluthile lubonisa ukuba luyakunqanda ukuhla kweememori kunye nokwehla okanye ukuguqula isifo se-Alzheimer kwiimiceba. Abacwaningi be-AASraw sebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokuqonda indlela i-J147 powder isebenza ngayo. Ekugqibeleni bagqiba ukuba ijogethi ye-J147 powder yiprotheni ye-mitochondrial ebizwa nge-ATP synthase, ngokukodwa i-ATP5A, i-subunit yale protheni. I-ATP synthase ibandakanyeka kwimveliso ye-mitochondrial ye-ATP ngamaseli amandla. Ngokunciphisa umsebenzi we-ATP synthase, banako ukukhusela iiseli ze-neuronal kwiintlobo ezininzi zobunobunqunu obuhlobene nokuguga kwengqondo. Esinye isizathu sokuba le mphulo ye-neuroprotective icatshulwa kukuba yinxaxheba yecitotoxicity kwi-neuronal cell injury. I-J147 Ubunzima bubopha kwiiprotheni ezitholakala kwi-mitochondria, ichiza lidlala indima ebalulekileyo. Le yindlela enamandla yamaseli, okubangela ukuba iiseli zisebenze ngendlela encinci.
Kwisifundo esitsha, Iqela leAASraw yafumanisa ukuba i-J147 powder cas: I-1146963-51-0 ibophelela kwiprotheyini ebizwa ngokuthi i-ATP synthase, enoxanduva lokuvelisa i-cellular "cash currency", i-ATP. Le protheni iyaziwa ukulawula ukuguga kwezibungu neempukane. Abaphandi bafumanisa ukuba ngokudibanisa neziyobisi, iziyobisi zinokuthintela ukulimala kwengqondo yobudala. Inxaxheba ye-ATP synthase ekuvimbeleni ukuphepha kwe-neuroprotection against excitotoxicity yaboniswa. Uphando lwesibini lubonise ukuba imodeli yemouse ebonisa uhlobo lomntu lwe-ATPase inhibitor 1 (hIF1) (okubangelwa ukukhuseleka okuqhubekayo kwe-ATP synthase) kunakhokelela ekufeni kwe-neuronal emva kokulimala kwe-excitotoxic. Le datha iyahambelana nale nto uphando olutsha lweJ147 apho kwenyuka i-IF1 kwimicebe kuncitshiswe umsebenzi we-ATP synthase (ngokukodwa i-ATP5A) kwaye yayingenayo i-neuroprotective.
Idatha echazwe apha ibonisa ukuba i-J147 powder cas: 1146963-51-0 unako ukuhlangula ukulahlekelwa kwengqondo ekulawuleni kwexesha lesi sifo. Ikhono le-J147 powder ukuphucula umsebenzi wememori kwiigundane ze-AD ezindala zihambelana nokufakelwa kwayo kwe-neurotrophic factors NGF (i-nerve growth factor) kunye ne-BDNF (i-brain-derived neurotrophic factor) kunye neeprotheni ezininzi eziphendulayo ze-BDNF ezibalulekileyo ekufundeni nasekukhunjweni. Ukuthelekisa i-J147 powder kunye ne-scopolamine kwi-scopolamine imodeli ibonisa ukuba nangona zombini izixhobo zifaniswa nokugcina imemori yesikhashana, i-J147 powder iphakamileyo ekuhlanguleni imemori yendawo, kunye nokuhlanganiswa kwezi zibini zisebenza ngokugqithiseleyo kwimemori yesimo kunye nememori.
Ukongeza, i-AASraw yafunda ezinye iimlekamo ezichaphazelekayo yi-J147 powder cas: i-1146963-51-0 ngaphezu kwe-ATP ukufumana iithagethi zamachiza ezintsha. Ngelo xesha, eli liyeza liye lagqityha uvavanyo lwezilwanyana kunye nokungena kwisigaba sokuqala sovavanyo lweklinikhi yomntu kungekudala, silinde inkxaso engaphezulu
3. SARMS I-X XUMUMX Isilinganiselo sokuThatyathwa
Incomo I-J147 Powder Isisombululo: 20-30mg yokukhusela i-neurological, i-neuroregenerative, anti-neurodeergenerative, anti-depressant, isifo se-Alzheimer. I-5-15mg yokuphuculwa kwengqondo. Izicelo ngaphakathi kwimiqulu engaphantsi kwe-hydroalcoholic-glycerin esekelwe kuyo ingabonakala iphakamileyo.
In vitro: i-sarms J 147 powder yayisetyenziswe kwi-1 μM kwi-vitro nakwiimvavanyo zamaselula.
Kwi-vivo: i-sarms J 147 powder yahlanjululwa ngomlomo kwiigundane kwi-1-5 mg / kg kanye ngosuku. Okanye amagundane e-transgenic atyiswa nge-sarms J 147 i powder case: 1146963-51-0 kwi-chow yabo kwi-200 ppm ukuqala kwiinyanga ezili-4.
I-X XUMUMX powder eqikelelwa ukuba isilingo sezonyango zomntu: I-147 ukulinganisa iifom ehambelana naso nasiphi na isilingo esilindelekileyo sekliniki yoluntu, esekelwe kwiinkcukacha zezilwanyana ezikhoyo, zihambelana nokulindelwa kwi-147-20mg qd okanye ibhidi ukwenzela ukuba kuxhomekeke kwi-neurogenic-dependent / i-neuroregenerative / anti-neurodeergenerative (i-Alzheimer's Disease, et. al.) ezixinzelelekileyo, izimo zokuzinzisa, kunye nokunyangwa kwe-anti-addiction. Isisombululo esiza kubonakala sibe yinzuzo kwiimeko ezincinci kunye / okanye ukuphuculwa kwengcamango kuya kubonakala ngathi ku-30-5mg qd okanye ukubizwa kwe-Oral bioavaponsibility ibonakala ilula, kodwa ibalulekile. Izicelo zoqhagamshelwano ngaphakathi kwimiqulu engezantsi ze-hydroalcoholic-glycerin ezisisiseko zingabonakala ziphezulu.
4. Izinzuzo eziphambili ze-Sarms J-147 powder
Ukuphucula isifo sikashukela
Ukuphucula umsebenzi wengqondo
Ukuthintela nokuphelisa ukugula komzimba
Ukukhusela izifo ze-Alzheimer's
Ukuphucula umsebenzi weMitochondrial kunye nobude obude
Ukulwa nobuhlungu kunye Neuropathy
5. Ziziphi iimpawu eziphambili zengxelo ye-J-147 yokuhlolwa kwe powder?
Kwimvavanyo eyahlukileyo, izazinzulu zivavanye i-J147 powder cas: i-1146963-51-0 malunga ne-Aricept (i-generic fakepezil), isistim se-Alzheimer esasetyenziswa ngokubanzi, kwaye ifumene ukuba yenzeke okanye ingcono kwimvavanyo emininzi yememori.
Ukulawulwa ekudleni kwamagundane asebekhulile kunye nezofuzo, i-J147 powder yakwazi ukujika, kwanexesha elidlulileyo kwisifo, ukulahlekelwa kwememori emva kweenyanga ezintathu zonyango.
Abaphandi bafumanisa ukuba ngelixa zombini iziyobisi - Aricept kwaye J147 powder - ukuphucula imemori yesikhashana, kuphela i-J147 powder eyenze imemori yendawo. Bafumanisa ukuba ukudibanisa iziyobisi basebenze bhetele kunokuba bodwa.
I-J147 yokukwazi ukulungisa umonakalo we-neuronal ingenza kube luncedo ekuphatheni ezinye izifo ezingenayo i-neurodeergenerative ezifana ne-Parkinson.
I-J147 ipowder cas: I-1146963-51-0 ine-toxicity ephantsi kwaye ibuyisela umonakalo kwi-neurons ehambelana ne-Alzheimer's.
6. Ngaba zikhona naziphi iimpembelelo zangasese Xa usebenzisa i-J-147 powder?
I-J-147 Powder eluhlaza Iimeko: I-1146963-51-0 iyancipha ukushisa kangangokuthi igcinwe kwiifriji zezokwelapha ezilawulwa ngubushushu kude kube nexesha lokupakisha. Ukuthunyelwa kunikezelwa ngesandla kwisithuba seposi ngexesha elithile ukwenzela ukuba ugweme ukufudumala kwexesha elide ngexesha lokunyamekela iinkonzo zeposi. Oku kuqinisekisa ukuba i-J-147 powder i-powder cas: I-1146963-51-0 oyifumanayo ihlambulukile kangangoko.
UKUKHUMBULWA: Le nxalenye yenzelwe uphando kuphela. Njengazo zonke iimveliso zamakhemikhali, kukho izingozi ezibandakanyeka ekusebenziseni i-J-147 powder i-powder case cas: 1146963-51-0. Nceda uqhagamshelane nodokotela kunye nophando olukhoyo ngaphambi kokusetyenziswa. Le mveliso ayihlose ukuxilonga, ukunyanga, ukunyanga okanye ukukhusela nasiphi na isifo.
Inguqulo esebenzayo ebizwa ngokuba yi-T-006 powder xa idibanisa i-tetramethylpyrazine kunye ne-J147 powder (ithatha i-methoxyphenyl iqela le-J147 powder cas: 1146963-51-0 ithatha indawo yayo nge-tetramethylpyrazine). R
Ngoko nantsi into oyifunayo ukuze wenze enye indlela efanelekileyo ngakumbi J147 powder online
I-Curcumin (njengeTurmeric neGinger) - Ndiyathanda ukusebenzisa le combo njengesongezelelo
I-Tetramethylpyrazine (njengeLigusticum wallichii okanye iTrocolate kunye neNatto)
Ezinye izithako Ukuba Ukwenza Ukutya-I-Version (i-Black Pepper, i-Stevia, iTyuwa)
Unako ukuncedisa bobabini okanye ubenze zibe ukutya (zombini unempembelelo eyahlukileyo kum).
Ukuba uya kuncedisa:
IJ147 china powder i-metabolizes kwi-CAD-31 ebuchosheni.
I-CAD-31 ekwandiseni ukusetyenziswa kwamafutha e-free acids kwimveliso yamandla ngokutshintshwa kweprogram ye-metabolic ye-fatty acids ngokuveliswa kwamalungu e-ketone, umthombo onamandla wamandla engqondweni xa amazinga e-glucose aphantsi. R
Ngaloo ndlela unokongeza i-Ketones (isisu esingenalutho kusasa) okanye ukuya kwi-Diet Ketogenic
Ukwenza inguqulo yokutya (ukunikezelwa ngeveki ye-1):
Iinqwelo ze-3 ze-Chocolate emnyama kunye ne-3 tbsp yeCononut Oil kwi-pot okanye epanini
Yongeza i-2 tbsp yale nxalenye ekhethekileyo yeNatto kwiphokoleta
Yongeza i-2 tbsp ye-Turmeric, i-2 tbsp ye-Ginger, i-2tsp ye-Powder Pepper powder (ingongeza i-pinch yeTyuwa okanye iStvia ukuba ubumnandi)
Makupholile (kwaye nidle) okanye nisifake kwaye nidle / nidle
1. Iimpembelelo zokuncedisa I-J-147 powder(exp over 1 ngenyanga):
Ukuphucula umbono kunye novumba
2. Imiphumo evela kwinguqulo yokutya ye-T-006 powder (exp exp over 3 months):
Ukwandisa ukuthetha ngomlomo / ubuncwane
9. I-SARMS ngakumbi Inkqubo yokukhetha
1. I-AC262356 CAS: 870888-46-3
2. I-LGD3303 CAS: 1196133-39-7
3. I-SR9011 CAS: 1379686-29-9
5. I-YK11 CAS: 431579-34-9
6. I-RAD140 / I-CAS Testolone: ​​1182367-47-0
8. I-GW 501516 / iKardiarine CAS: 317318-70-0
9. I-SR9009 CAS: 1379686-30-2
10. IS4 / I-Andarine CAS: 401900-40-1
11. I-S23 CAS: 1010396-29-8
12. MK 2866 / I-OASASINE CAS: 841205-47-8
13. I-Trestolone Acetate / I-CAS MENT: 6157-87-5
10. Ungawufumana phi umthombo we-J-147 powder?
I-AASraw ngumthombo omnye wemfanelo wokukhetha, ukuba ulwazi olungaphezulu. kufuneka ukwazi, nceda Qhagamshelana nathi.
Jack jill05 / 18 / 2018 kwi-2: 32 ntambama
Leyo ngcaciso eninzi. Ubhala kakuhle. I-Estrogen inokuthi ifakwe emzimbeni wakho ngeendlela ezahlukeneyo. Inokukunceda nakwi-ovarian cysts. Kwakhona kunceda ukulawula umjikelezo wokuya esikhathini, ukulawula ukukhula kobumba lwe-uterine ngethuba lokuqala lomjikelezo.
I-Nootropic i-Pramiracetam powder: iinzuzo, umyinge, umphumo	Thenga i-Smart Drug Sunifiram powder online